Dibad-baxyo looga tuugayo Alexis Sanchez inuu isaga soo tago Arsenal oo fashilmay!!!+MUUQAAL – Gool FM
Byare March 2, 2017
(Europe) 02 Mar 2017. Dibad-baxyo looga tuugayo Alexis Sanchez inuu isaga soo huleelo kooxda Arsenal ayaa dhicisoobay kaddib markii ay soo xaadireen shan qof oo kaliya.
Dibadbaxayaasha ka soo jeeda koonfurta Ameerika ayaa ka cabanaya in wiilkooda ee tusaalaha u ah xulka Chile uu u ciyaarayo koox fashil ah.
Qaban-qaabiyaasha bananabaxan ayaa filayay inay soo xaadiraan dadyow tiradooda gaaraya ilaa 14,000 balse nasiib daro wuu ka dhicisoobay.
Abaabulka sheekadan ayaa markii hore si kaftan ah uga soo bilaabatay bogga facebook, haseyeeshee inkastoo kumanaan u dhashay Chile ay ka mideysnaayeen qadiyadan ayaa misane shan ruux oo qura ay yimaadeen halkii lagu balansanaa.
Dibadbaxayaasha doonayay in Sanchez uu isaga soo tago Arsenal ayaa hal ku dhigooda u dhacayay sidan:
“Innaga ka reer Chile ahaan, qaati ayaan ka taagannahay inaan daawano in mid ka mid ah xiddigaheena ugu wayn uu kaligii ciyaaro.
“Ma dooneyno inuu u ciyaaro Real Madrid ama uu dib ugu laabto Barcelona, wax innaga galay ma jiraan halka uu ku ciyaarayo waxaan dooneynaa uun inuu helo 10-kale oo dagaalka la gasha si ay natiijooyinka u helaan.
“Uma qalmo inuu kaligii ahaado.”.
Sanchez oo ku jira sanadkiisii saddexaad ee Arsenal ayaa kula guuleystay FA Cup oo qura waxaana uga harsan heshiiska uu ku joogo Emirates 18-bilood iyadoo la sheegay inuu ku lug lahaa khilaaf ka dhashay qolka dhar-badelashada kooxda kaddib guul daradii darneyd ee Champions League ka soo gaartay kooxda Bayern Munich lugta hore ee wareega 16-ka.
"War orod waxaad tahay canug ooyaaye oo fuley ah." ....(AQRISO tan kala qabsatay Ozil iyo Mourinho!!)